Shir 3-geesood ah oo Garowe uga furmay madaxda Puntland, TFG-da, & Ahlu-suna. – Radio Daljir
Oktoobar 16, 2011 12:00 b 0
Garowe, Oct 15 ? Waxaa maanta aqalka madaxtooyada ee magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland kulan ballaaran ku yeeshay dawladda Puntland iyo wafuud ka kala socotay dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, culimo aw-diinka Ahlu-sunna Waljamaaca iyo saraakiil sar sare oo iyana ka socda hay?adda UNPOS.
Kulankaasi oo muddo saacado ah qaatay ayaa looga arriminayey xal-u-helidda xaaladda nabadeed ee Soomaaliya oo muddo dheer ahayd mid muransan, waxaana gabagabadiisii la iskula meel-dhigay habka loo maarayn karo mushiladdaha daba-dheeraaday ee Soomaaliya gaar ahaanna xagga amniga.
Qarshahaan kulan ayaa ah mid daba-socday kulan todobaadkii hore golaha wasiirrada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo laga soo saaray nuxur-murtiyeed ku abbaarnaa qorshaha qaranka ee xasilinta iyo nabadaynta dalka, kaddibna la go?aamiyey in garabyada Soomaalidu ku darsadaan aragtidooda ku aaadan amni ku soo dabbaalidda Soomaaliya.
Waftiga ka socday dawladda federaalka oo hurmuud u ahaa hirgalinta qorshe-qarameedka dawladda Soomaaliya ee ku saabsan xasilinta iyo nabadaynta waddanka, ayaa ahmiyadooda imaatin ee deegaannada Puntland ay ku salaysnayd sidii la-tashi buuxa loogala samayn lahaa maamulka Puntland nidaamka qarameed ee nabad-u-helidda Soomaaliya.
Shirkaasi maanta waxaa dhinaca dawladda federaalka uga qaybgalay wafti uu hoggaaminayey afhayeenka xukuumadda federaalka Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisaw, dhinaca Puntland-na waxaa u matalayey m/weynaha ku-xigeenka Puntland ahna ku simaha m/weynaha Gen. Cabdisamad Cali Shire iyo xubo kale duwan oo ka tirsan golayaasha dawladda Puntland, halka Ahlu-sunna iyo hay?adda UNPOS-na ay u kala matalayeen saraakiil sarsare oo ka mid ah hoggaannadooda.
Markii uu dhammaaday kulankaasi ayaa shir saxaafadeed ay si wadjir ah u qabteen wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan, afhayeenka xukuumadda federaalka Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisaw iyo Maxamed Maxamuud Yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga fulinta ee Ahlu-sunna Waljamaaca ee gobolka Gedo, ayey uga xog-warrameen micnihi kulankoodu uu xambaarsanaa iyo waxybaaha la isla meeleeyey.
Madaxdu, waxay shirkooda jara?id ku sheegeen in ay isku af-garteen dhammaan qodobadkii la isla soo qaaday ee ku aaddanaa qorshaha xasilin iyo xal-u-helineed ee xaaladda nabadeed ee Soomaaliy, kaasoo ah qorshe ka yimid dhinaca dawladda federaalka garabyada kalena ay ku darayeen aragtida iyo fakarka ay ka qabaan xal-u-helka nabadda Soomaaliya.
Kulankaan ayaa yimid xilli ay socdaal dadaallo ballaaran oo ay waddo dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, ayna ku doonayso in ay dib ugu hanato gobollada kala duwan ee dalka gaar ahaanna kuwa ay gacanta ku hayaan ururka Al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena uu jiro walwal laga qabo ururka Al-shabaab in uu u digo rogto deegaanno cusub.
Baahin: Sabti, Oct 15, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Galkacyo. R/wasaare Gaas oo tafaasiil ka bixiyey kulan uu Muqdisho kula yeeshay Amb. Mahiga; Shir wadatashi ah oo Garowe ku dhex maray madaxda Puntland, dawlada federaalka ah & Ahlu-sunna; Dawlada hoose ee Galkacyo oo hawlo ka bilawday xaafada Garsoor; ciidanka amniga oo iyana ka hawlgalay koontaroolka koonfureed ee magaalada.